Dharka Hindu-ga ee ragga, dharka Hinduuga muxuu yahay midka caadiga ah? | Safarka Absolut
Dharka ragga Hindu
Dharka looga isticmaalo Hindiya, soosaarayaal badan ayaa adeegsada dhar midabyo kala duwan leh iyo midabbo. Gudaha ragga dhar, Dharka ayaa loo diyaariyey inay iska caabiyaan nooc kasta oo cimilo xun ah ama sidoo kale waxay diiradda saarayaan caqiidooyinka diinta.
oo dhan dharka ragga ee Hindiya waxay ku socdeen isbedelo. Sababtuna waxay tahay tartiib-tartiib saamaynta Islaamku waxay si tartiib tartiib ah u gashay dhaqanka Hindida, iyadoo wax laga beddelay xitaa qaababka dharka.
Saamaynta Mongolian Dharka Hindida waxaa sidoo kale lagu xusay maanta by jaakadaha xidhan taas oo maanta laga arki karo dharka qaarkood. Jaakadan dhexda ku xidhan ayaa la yidhaa jama oo haddii lagu xidho surwaal, magaca buuxa ayaa ah bajaasta
Dhamaan dharka Hindida waxaa lagu kaabayaa dahabka iyo dahabka qaar waxaana loo adeegsadaa siddooyin ka cagaha ama anqawyada ilaa guntimaha loogu talagalay aagga sanka (in kasta oo kan dambe ay haweenku kaliya isticmaalaan)
Dadka ugu taajirsan Hindiya waxay badanaa xirtaan waxyaabaha qurxinta ee xiisaha lehs, kuwaas oo ah kuwa xadidaya fasalada, kana badan dharka dharkaaga loogu talagalay.
1 Noocyada dharka Hindu-ga ee ragga
1.5 Churidar ama salwar
Noocyada dharka Hindu-ga ee ragga
Dhoti waa nooc ka mid ah dharka Hinduuga taas ayaa loo isticmaalaa Deegaanka Bengal Badanaa, laakiin inyar inyar ayay noqotay dhar laga isticmaalo qaybo badan oo Hindiya ka mid ah.
Waa dhar qaab afargeesle ah looguna talagalay gebi ahaanba cudbiga. Wuxuu cabiri karaa ilaa 5 mitir wuxuuna ku duuban yahay jirka.
Xaaladaha badankood, dhoti Waa nooc ka mid ah dharka ku jira midabka cad ama midabka kareemka ah. Badanaa waxay ku wareegsan tahay aagga dhexda iyo lugaha dhexdooda. Kan dheer, hel surwaal fudud laakiin xarrago leh iyo dusha sare.
Khalat waa dharka Hinduuga loogu talagalay cudbi ama xariir (waxay kuxirantahay sida qof kastaa u doonayo) waxaana looga isticmaalaa meelo badan oo Hindiya ah. Dharkaan noocan ah ragga iyo dumarkuba si isku mid ah ayey u xiran karaan, maxaa yeelay ma lahan nooc jinsiyeed nooc kasta ah.
Dharkaan waxaa caadiyan loo adeegsadaa abaalmarin sharaf, sida gogosha looga isticmaalo Hindiya.
In kasta oo tani aysan ahayn nooc ka mid ah dharka sidan oo kale, haddana sidoo kale waa qayb ka mid ah ragga ku nool Hindiya. Waa hub yar oo ujeeddooyin astaamo ah oo keliya. Tooreydu waxay astaan ​​u tahay dhamaadka cadaadiska iyo caddaalad darrada.
Este Kaabista dharka ragga ee Hindiya, waxaa lagu xiraa suunka la yiraahdo Gatra. Markii hore waxay ahayd seef weyn oo loo adeegsan jiray xafladaha, laakiin maalmaheenna, waxay noqotay oo keliya seef yar oo lagu xidho dharka.
Qalabkan waligiis looma adeegsan karo hub ahaan.
El Kurta Iyagu waa nooc kale oo ka mid ah dharka Hinduuga ragga ka yimid Hindiya oo ka kooban shaati ballaadhan oo dabacsan oo caadi ahaan gaadha aagga jilibka oo ay xidhan karaan ragga ama dumarku si aan kala sooc lahayn. Marka laga hadlayo dumarka, kurta waxay gaaraysaa korka jilibka.
Inkastoo markii ugu dambeysay, Kurta Waxaa badanaa lagu xiraa jiinis, caadi ahaan waxaa lagu xiraa Salwar iyo surwaal churidar. Surwaalladaasi way ballaadhan yihiin, laakiin waxay leeyihiin astaamo ay ku dhagan yihiin aagga canqowga.
Dharka noocan ah ayaa loo gashan karaa sidii dhar rasmi ah, in kasta oo dad badani xirtaan maalin kasta.
Churidar ama salwar
El churidar waa nooc aad loo jecel yahay oo ah surwaal wuxuuna noqday nooc ka mid ah surwaal salwar; Si kastaba ha noqotee, salwarku way ku kala duwan yihiin inay taabtaan canqowga iyo churidar taper wax yar ka hor intaanay imaan, taas oo siinaysa muuqaal gebi ahaanba ka duwan, taas oo ka dhigaysa qeexitaanka lugaha mid dambe.
Noocyada ugu wanaagsan ee surwaal ee qaabkani waa kuwa xoogaa dabacsanaan leh, tan iyo markii ay aad u dhagan yihiin, waxaa muhiim ah in qofka adeegsadaa uu si xor ah u dhaqaaqi karo.
Kaabiddan waxaa loo yaqaan "raalli ahaanshaha boqorrada”Waana nooc ka mid ah suuf aad u wanaagsan oo tolmo badan oo timo badeed kala duwan loo adeegsaday. Harqaanleyda noocan ah shaal-sameynta ayaa ah kuwa kaashka ka sameeya waxayna sameeyaan shaqooyin farshaxan oo dhab ah.
Markii hore, shaaryadani waxay u ahaayeen raaxo dhab ah qofka gashaday, maadaama ay soo saariddooda oo qaali ah oo waqti badan ku qaadatay, qiimaha aad u sarreeyay. Intaa waxaa dheer, xirfad badan ayaa loo baahday si ay u awoodaan inay isku tolaan timaha biciidka, maxaa yeelay waxay leeyihiin dhexroor 9 mikrometer ah
Qofka lahaa shaal sidan oo kale ah wuxuu ku haystay shay aad u qaali ah oo qiimo badan.
Ma kuu cadaatay waxa ay yihiin dharka Hindu-ga ee caadiga ah ee ragga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Dharka ragga Hindu
Dharka, goonnada, iyo dharka aan forked for ragga yihiin ikhtiyaarka ugu fiican, Caafimaadka, raaxada, iyo ixtiraamka. Surwaalku waa torutra markasta
Ku jawaab israa'il
maxay kaliya u isticmaalaan moodellada labka ah inay ku labistaan ​​dharkaas maxaa yeelay ma isticmaalaan ragga dhabta ah ee ka yimid Hindiya
dharkaagu sidee yahay
Isticmaalka OVEROL, ama surwaal, wuxuu dhiirrigelinayaa cudurrada ragga ee casriga ah: itaal darrida, ma dhalaysnimada, dhibaatooyinka qanjirka 'prostate', kansarka xiniinyaha. Ma jiro qayb ka mid ah jirka ragga oo la nabarey ama loo xadgudbay sida xubnaha taranka. Waxaa jira sababo badan oo kale oo ninka qiil u siinaya inuu mar kale DHAARO. Surwaalku wuxuu astaan ​​u ahaa xadgudub, bandhig, iyo bahdil loo geysto haweenka iyo dhallaanka. Aad uga fiican, caafimaad badan, ka raaxo badan oo ixtiraam badan, oo hal abuur leh, in ragga ay xirtaan goonno, ama dharka goonnada leh.
Ku jawaab adiela
Maansooyin qaboojiya dharka caadiga ah waxay leeyihiin dadkan ka sokow inay aad u deggan tahay
Aniga ahaan waa mid raaxo leh oo waliba xarrago leh, dhar aad u fiican, waxaan jeclaan lahaa inaan ku isticmaali karo waddankayga. Raaxo iyo caafimaad marka hore.
Aabbo waad salaaman tahay, kan ugu dambeeya ee madow, wuxuu ka dhacayaa muuqaal wanaagsan
waxaa jira wixii aan mid ka mid ah in ahyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy madow qiyaasi abo Waxaan doonayaa in aan arko .................. .. dhoola
Waan ogahay inaad Indian yartahay laakiin waxa weyni kaaama soo baxayo
iyo hadaan ahay guey yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ?????????????????????? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Waxaan rabaa inaad ogaato inaad sariirta ila seexatid, aabbo madow madow !!!!!!
foodhi kor u taagay !!!!!!!!!!!!!!!
waxaad soo diri kartaa xiriiriyeyaasha sida loo isticmaalo dhoti
Dharkooda caadiga ah oo aad u qurux badan sababo la xiriira cadaadiska isku-darka
midabyo iyo qaybo dhar ah labadaba.
Jawaab maria emilia
INDIANSKA INDIA WAXAY LEEYIHIIN WIILKA GENIS JAAAAAAAA
Kuwa ka yimid Hindiya waxay leeyihiin They. Horeba way ogyihiin waxa ay ugu isticmaalaan.
Ku jawaab citlali
Soo jeedin aad u raganimo iyo xarrago leh
uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ayaa ka baxsan moodada halkan Kolombiya laakiin dharkaasi waa qabow oo dumarka sidoo kale
Maya Mamen waa dhar gaar ah, xarrago leh, suugaan leh iyo gaar ahaan mudanayaashu waxay u muuqdaan kuwo aad u soo jiidasho badan oo sababa farxad isla markaana sameeya mala awaalka Gabdhuhu markay la kulmaan INDU waxay taabanayaan waxayna dareemi doonaan inay u safrayaan Hindiya oo ay ku hareeraysan yihiin wiilal qurux badan
Jawaab ku bixi ColimaMexico
RAGA UGU QURUXDA BADAN INDIA OO AAN LAHAYN IN AY KA YIRAAHO DHARIGOODA WAAN JECLAHAY WAA MAXAY BADDA BADAN EE INDIA AADAN QIIMAYN JEEJE
Ku jawaab ztefan
Midkan qaaliga ahi wuxuu ninka siinayaa hawo suugaaneed isla waqtigaas ku leh xarrago, tan quruxda badan
Waan jeclahay dharka ka imanaya wadamada kale laakiin way ku adag tahay halkan Bolivia, Santa Cruz, waxaan jeclaan lahaa inaan iibsado dharkaas iyo faahfaahin kale, sideen ku heli karaa, fadlan?
Ku jawaab kalep
Qof ayaa garanaya meesha aan ka iibsan karo dharka noocaas ah, ha aqrin inuu ka yimid Hindiya lafteeda, kaliya waxaan rabaa inaan iibsado halkaan ku noolahayna ma iibiyaan runtuna waxay tahay waan jeclahay maxaa yeelay waxaan leeyahay dhiig Hindi ah laakiin wax walba waan ka jeclahay Hindiya
jawaab x fas choreo waa earvanggogh@hotmnail.com
Ku jawaab jose alfredo velasco
Waxaan leeyahay saaxiibo Indu oo iyagu sidaa uma lebistaan ​​laakiin dharkaasi wuxuu iila muuqdaa mid aad iigu raaxeysan
WAA MAXAY GOOBAHA AWOODA U LEH IN AY ARKAAN OO AANU IIBSAN KARO Dharka Ragga INDU, MAHADSANID
Barcelona dhexdeeda wadada loo yaqaan 'Casp street' waa dukaanka aagga qabiilooyinka
Ku jawaab renfadatsgarraf
dhaqankaas ayaa wax yar yaab leh
ma aaminsani ???
Ku jawaab yuli
guul eddy dijo
Dharkooda caadiga ah waa wax xiiso leh laakiin waxa aanan ka helin indho waa inay u sujuudaan xayawaan kasta, tusaale ahaan jiirka.
Ku jawaab guuleyste Eddy
jijij dharkaaga haha ​​xd xd
Ku jawaab alexin
wiilkeygu waa inuu baxaa isagoo xiran labiska meesha aan ka heli karo suud
Ku jawaab maria de los angeles sanchez alvarez
Waa wax xiiso leh laakiin waa inay sharraxaad dheeraad ah ka bixiyaan midabada asal ahaan laakiin waan ka helay dhotiiiiiiii
Ku jawaab natashagb26
Selva de Irati, oo ah meel sixran oo naftaadu ku weydo